Vaovao - fanasokajiana mpihazakazaka mahazatra.
Misy karazany maro ny fisamborana varatra, ao anatin'izany ny fisamborana oksida vy, ny fisamborana oksida metaly, ny fisamborana oksida vy tsy misy banga, ny fisamborana oksida metaly vita amin'ny palitao feno simika, ary ireo voasambotra azo esorina.
Ny karazana fisamborana dia ny fisamborana tubular, ny fisamborana valva ary ny fisamborana oksida zinc. Ny fitsipiky ny asa lehibe isaky ny karazana arrester ny varatra dia samy hafa, fa ny votoatin'ny fiasan'izy ireo dia mitovy, mba hiarovana ny tariby fifandraisana sy ny fitaovam-pifandraisana amin'ny fahasimbana.
Ny arrester tubular raha ny tena izy dia banga miaro miaraka amin'ny fahaizany mamono arc. Ahitana banga roa andiany. Ny banga iray dia amin'ny atmosfera, antsoina hoe banga ivelany. Ny andraikitr'izy ireo dia ny mitokana ny herinaratra miasa ary manakana ny fantsom-pamokarana entona tsy hikoriana amin'ny fantsona. Ny faharoa dia nodoran'ny alàlan'ny famoahana matetika ny herinaratra; ny iray hafa dia apetraka ao amin'ny fantson-drivotra ary antsoina hoe elanelana anatiny na elanelan'ny famonoana arko. Ny fahaizan'ny famonoana archer an'ny tuber arrester dia misy ifandraisany amin'ny haben'ny onjam-pahefana tsy tapaka mitohy. Izy io dia mpiambina tselatra banga miaro, izay matetika ampiasaina amin'ny fiarovana ny varatra amin'ny tsipika famatsiana herinaratra.
Mpanafika karazana valve
Ny mpandahatra karazana valizy dia misy elanelam-baravarana sy fanoherana lovia valizy. Ny fitaovana an'ny resistor lozam-valizy dia karbôna silika manokana. Ny valiha fanoherana valizy vita amin'ny karbônika silikika dia afaka misoroka tsara ny tselatra sy ny herinaratra avo ary miaro ny fitaovana. Rehefa misy herinaratra mahery, dia tapaka ny elanelam-baravarana, mihena ny sandan'ny fanoherana ny valin'ny valizy, ary ampidirina eto an-tany ny tselatra, izay miaro ny tariby na ny fitaovana elektrika amin'ny fahavoazan'ny tselatra. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia tsy ho tapaka ny elanelam-baravarana ary avo ny sandan'ny fanoherana ny valin'ny valizy, izay tsy hisy fiantraikany amin'ny fifandraisana mahazatra amin'ny tsipika fifandraisana.
Zinc oxide kilat arrester dia fitaovana fiarovana tselatra miaraka amin'ny fahombiazan'ny fiarovana ambony, lanja maivana, fanoherana ny fandotoana ary fahombiazana azo antoka. Ampiasaina indrindra ny toetran'ny volt-ampere volt-ampere tsy vita amin'ny zinc mba hampiakarana ny fantson-drano amin'ny alàlan'ny arrester kely (microamp na milliampere level) amin'ny volam-piasana mahazatra; rehefa miasa ny fihenan-kery tafahoatra dia milatsaka mafy ny fanoherana ary mamoaka ny angovo be loatra mba hahatratrarana ny vokatry ny fiarovana. Ny maha samy hafa an'io karazana arrester io sy ilay arrester nentim-paharazana dia ny tsy fananany elanelam-pivoahana ary mampiasa ny toetra tsy misy linear an'ny zinc oxide mba hanafoanana sy hanapahana.
Mpisambotra tselatra maromaro no ampidirina etsy ambony. Samy manana ny tombony sy ny mampiavaka azy ny karazana arrester. Mila ampiasaina amin'ny tontolo samihafa izy io mba hahatratrarana vokatra fiarovana tsara amin'ny varatra.